#भारत | Suvadin !
Suvadin Media 462 0
एजेन्सी । भारतमा कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमितहरू दिनहुँ जसो थपिइरहेका छन् । भारतमा गएको २४ घण्टायता ९ सय ४१ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । भारतीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार बिहानको तथ्यांकअनुसार भारतमा संक्रमितहरूको संख्या १२ हजार ३८० जना पुगेको छ । भारतमा देख...
Suvadin Media 112 0
भारतमा ५६ कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको मृत्यु
एजेन्सी । भारतमा शुक्रबारसम्म दुई हजार ३ सय १ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएकोमा ५६ जनाको मृत्यु भएको यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालये जानकारी दिएको छ । सङ्क्रमितहरू मध्ये १ सय ५६ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । अन्य दुई हजार ८८ अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन् । भारतको महाराष्ट्रबाट ३ सय ३५ व्यक्ति स...
Suvadin Media 203 0
एजेन्सी । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस संक्रमणबाट आज (बुधबार) एकै दिन १० जनाको ज्यान गएको छ । योसँगै भारतमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४५ पुगेको छ । भारतमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट एक हजार ५९० जना संक्रमित भइसकेका छन् । भारतीय आप्रवासी कोरोनाको त्रासले सयौं माइल हिंडेर घर...
भारतमा एक दिनमा थपिए २२७ संक्रमित, ३२ जनाको मत्यु
नयाँ दिल्ली । भारतमा नोभेल कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या पनि तीव्ररुपमा बढिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भारतमा एकदिनमा २२७ कोरोना संक्रमित थपिए हालसम्म एक हजार २५१ कोरोना संक्रमित पुगेका छन् भने ३२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या एक हजार...
Suvadin Media 148 0
भारतले आफ्ना ८० करोड नागरिकलाई तीन महिनासम्म नि:शुल्क खाद्यान्न दिने
काठमाडौं । कोरोना भाइरसबाट आतंकित बनिरहेको भारतले ८० करोड नागरिकलाई तीन महिनासम्म नि:शुल्क खाद्यान्न दिने भएको छ । भारतले चामल, गहुँ र दाल लगायतका खाद्यान्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । पाँच किलो चामल वा गहुँमध्ये एक र एक किलो दाल तीन महिनासम्म नि:शुल्क दिने भारतले घोषणा गरेको हो । यस्तै, भारत...
भारतमा एकै दिन १२१ कोरोना संक्रमित थपिए, १२ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ६ सय नाघेको छ । एकै दिन १ सय २१ जनामा संक्रमण देखिएको छ । विहीबार विहानसम्म भारतमा संक्रमितको संख्या ६५७ पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १२ पुगेको छ...
भारतमा थप ३२ जनामा देखियो कोरोना भाइरसको संक्रमण
एजेन्सी । भारतमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ । भारतको महाराष्ट्रमा आजमात्र ११ जना व्यक्तिमा कोरोनाको संक्रमण भेटिएको छ । योसँगै महाराष्ट्रमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ६३ पुगेको छ । शनिबार बिहानसम्म २ सय ५० मा रहेको संक्रमण दिउँसो आइपुग्दा २ सय ८२...
Suvadin Media 184 0
एजेन्सी । कोरोनाको डरले भारतको उडिसा राज्यमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ । भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिँदै गएपछि उडिसा राज्यको मन्त्रिपरिषद बैठकले आज आपतकाल घोषणा गरेको हो । बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आपतकालीन ऐन २००५ को प्रावधान अनुसार कोभिड–१९ को महामारीलाई मध्यनजर गर्दै आपतकाल घोषणा...
Suvadin Media 160 0
भारतमा होली मनाएर नदीमा नुहाउने क्रममा १५ जनाको मृत्यु
ओडिसा । भारतको ओडिसामा होली मनाएर नदीमा नुहाउने क्रममा १५ जनाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार होली मनाएर नुहाउने क्रममा विभिन्न स्थानमा गरी १५ जनाको मत्यु भएको हो। बीबीसीका अनुसार होली मनाएर आफ्ना साथीसँग विभिन्न नदी तथा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेका १५ जनाको शव भेटिएको सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन्।...
कोहली र केएल राहुलको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा भारत ४ विकेटले विजयी
काठमाडौं । कप्तान विराट कोहली र केएल राहुलको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा प्रेरित घरेलु टोली भारतले वेस्ट इन्डिजविरुद्धको तेस्रो एकदिवसीय अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा ४ विकेटको जित निकालेको छ । तीन सय १६ रनको विशाल लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ थालेको भारत ४८ दशमलब ४ ओभरमा ६ विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेटाउ...
Suvadin Media 385 0
Suvadin Media 164 0
काठमाडौं । भारत लगायत, अन्य देशहरूमा रहेका नेपालीहरूले एटीएममा समस्या आएको गुनासो आएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य उपचार लगायतका विविध कामले भारत, सिंगापुर, थाइल्याण्डलगायतका देशहरूमा रहेका नेपालीहरू आफूले बोकेको एटीएम कार्ड नचलेर सास्ती पाएको समाचार आएपछि राष्ट...
Suvadin Media 382 0
भारतलाई हवाई प्रतिबन्द लगाउने पाकिस्तानको तयारी
पाकिस्तान । पाकिस्तानले भारतका लागि आफ्नो हवाई क्षेत्र बन्द गर्ने तयारी थालेको छ । पाकिस्तानका विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री फवाद हुसैन चौधरीले भारतका लागि आफ्नो हवाई क्षेत्र बन्द गर्ने तयारी भएको बताएका हुन् । चौधरीका अनुसार पाकिस्तानले आफ्नो हवाई क्षेत्र पूर्ण रुपले भारतका लागि बन्द गर्ने विषयमा...
मोदीको नेपाल भ्रमणअघि चीन जाँदै एस जयशंकर, पाकिस्तानका विदेशमन्त्री फर्किए
एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर आइतबार चीन गएका छन् । भारत-चीन उच्चस्तरीय संयन्त्रको दोस्रो बैठकमा भाग लिन उनी बेङजिङ गएका हुन् । गत वर्ष स्थापना भएको उक्त संयन्त्रको दोस्रो बैठकको मिति पूर्वनिर्धारित हो। तर भारत...
भारतबाट आयत बन्द गरिएपछि तरकारी तथा फलफूलको मूल्य आकासियो
डोटी । केही दिनयता भारतबाट नेपाल आउने तरकारी व्यापारीले मगाउन छोडेपछि डोटी जिल्लासहित यहाँका अन्य पहाडी जिल्लाहरुमा तरकारीको मूल्य आकासिएको छ । यहाँका पहाडी जिल्लाहरुमा मागअनुसारको तरकारी उत्पादन नहुने तथा भारतबाट आयात गरिने तरकारीमा विषादी देखिन थालेको भन्दै तरकारी आयात बन्द भएसँगै दीपायलमा तरकारील...
DilipKarki 267 0
अत्यधिक गर्मीका कारण भारतमा ७१ जनाको मृत्यु
नयाँ दिल्ली । भारतको विहारमा अत्याधिक गर्मीका कारण ७१ जनाको ज्यान गएको छ । बिहारको औरंगाबाद जिल्लामा ३३, गयामा २५ र नवादामा १३ गरी ७१ जनाको ज्यान गएको जिल्ला अस्पताललाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । तर बिहार सरकारले भने यसको पुष्टि गर्न बाँकी रहेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । राज्य सरकारक...
भारतमा अन्तिम चरणको निर्वाचन जारी, चार दिनपछि नयाँ बन्‍ने सरकारको फैसला
नयाँ दिल्ली । भारतमा आज १७ औं लोकसभा अन्तर्गतको सातौं तथा अन्तिम चरणको मतदान सुरु भएको छ । यो चरणमा उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगालसहित सात राज्य र केन्द्र शासित राज्यका ५९ सिटका लागि मतदान हुँदैछ । यो चरणमा उत्तर प्रदेश र पञ्जाबका १३, विहार र मध्यप्रदेशका ८–८, पश्चिम बंगालका ९, हिमाञ्चल प्र...
DilipKarki 255 0
भारतबाट रेलका दुईवटा डिब्बा ल्‍याउने सहमति
काठमाडौं । भारतले नेपाललाई रेलका दुई वटा डिब्बा दिने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । शुक्रबार नेपालको रेलवे र भारतीय कम्पनीबीच यो सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिव सिंह पुरीको उपस्थितिमा कोंकोण कम्पनी...
Govinda Luitel 930 0
आफ्नै बुवासँग किन बदला लिए अखिलेशले ?
विप्लव मरासिनी काठमाडाैं, माघ ४ राजनीतिलाई ‘फोहोरी खेल’ पनि भनिन्छ। आफू सत्ता र शक्तिमा आउनका लागि त्यहाँभित्र अनेक दाउपेच चलिरहन्छन्। सहोदर बुवा-छोरामा पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भइरहेकै हुन्छ। तर, हालै छिमेकी भारतको उत्तरप्रदेशमा त आन्तरिक मात्र होइन, बावु-छोराबीच यस्तो कटुत...
Suvadin Desk 483 0
काठमाडाैं, पुस २९ भारत, अहमदाबादका एक १४ वर्षे किशोर अहिले चर्चामा छन्। बुधबार त्यहा आयोजित ‘भाइब्रेंट गुजरात समिट’मा उपस्थित छात्र हर्षवद्धन जाला एउटा ड्रोनको डिजाइन तयार गरेपछि विश्वभर चर्चामा छाएका हुन्। उनले त्यो डिजाइनमा काम गर्नका लागि तत्काल गुजरात सरकारसँग पाँच करोड भारुक...
Suvadin Desk 595 0
Ashok Adhikari 780 0